DAAWO: Nooca Qaraxa ee Garoowe, Khasaaraha ka dhashay, Warka Dawladda & Dhaawaca Masuuliyiinta
March 29, 2020 NEWS 13
GAROOWE(P-TIMES) – Xaaladda magaalada Garoowe ayaa degan, ka dib markii Maqribnimadii uu ka dhacay agagaarka barxada magaalada qarax loo adeegsaday qof Naftii haligay, kaas oo isku qarxiyey gudoomiyaha gobalka Nugaal & saraakiisha Amniga ee gobalka, kuwaas oo goobta kusugnaa.
Khasaaraha ka dhashay weerarkan Argagixiso ayaa ah dhaawacyada dad gaaraya 7 ruux oo uu kujiro Gudoomiyaha gobalka Nugaal Xassan Gujir, waxaana sidaas oo kale ku jira qaar kamid ah shacabka magaalada Garoowe.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay ciidamadu dabagal wadaan, isla markaasna ay dib ka bixin doonaan faahfaahin dheeraad ah.
Duqa magaalada Garowe ayaa sheegay in xaaladda dhaawacyada ay roon tahay, isagoo sheega in gudoomiyaha gobalka hadda uu ku jiro Qaliin ayna sameynayaan dhakhaatiirta caafimaadka.
Saraakiisha Hay’addaha Amnigu, waxay xaqiijiyeen in la wado baaritaano dheeraad ah oo lagu ogaanayo halka laga soo abaabulay weerarkan Argagixiso, iyadoo aysan jirin cid wali sheegatay weerarkaas.
Puntland ayaa dagaal adag mudo sanoyin ah kula jirta kooxaha Argagixiso ee Daacish & Al- Shabaab oo labaduba ay kula dagaalamayaan gobalka Barri, ayna mararka qaarkood qaraxyo iyo dilal ka geysteen magaalooyinka Gaalkacyo iyo Boosaaso.
Waxaa qaraxaan ka dambeeya Alshabaab iyo Somaliland waxaana loogu aarayaa labadii nin ee lagu diley Laascaanood oo kala ahaa guddoomiyaha maxkamadda iyo madaxii sirdoonka Somaliland u joogey Laascaanood.
Waxaa qaraxa garowe fuliyey Alshabaab laakiinse waxaa dalabka iyo kharash bixisey Somaliland.
Waxaan kale reer Puntland u sheegayaa in ciidamada sirdoonka Somaliland ay si xad dhaaf ah u joogaan garowe iyo magaalo kasta oo ka mid ah Puntland.
Wallaahi Somaliland waxay awoodaa in mid mid u disho madaxda Puntland.
Somaliand waxba ma dishee runta dadka u sheeg inaad warsangeli ku sheegayso argagixiso walee saldhigi maysid ee argagixiso majirtee umada been ta ka daa, wakhtigii yurubta dhaqaalaha lagaga cuni jirey wuu dhamaaday iyo wakhtigii ithiopia aad dadka ka ii San jirteen umada Walaal aha ah u tudh, oo isu keen, heshiisii
Sidaasay gobolka bari iyo nugaal wax ku noqonayaan
Qof kasta oo uu caqligiisu taam yahay waxaa maankiisa deeqi la’ hadalka ah “dacish” iyo “shabaab” baa Puntland ka dhex shaqeysanaya oo la leeyahay dharaar cad ayay magaalada Boosaaso ganacsatada baadda kaga qaataan. Duulkani cirka kama soo dhacaan or ciidda kama soo baxaan ee soow macnuhu ma aha in ay yihiin dad deegaanka ka soo jeeda oo reero ka soo toosa oo una hooyda?
Sartu halka ay ka qudhuntay weeye oo waa maamul iyo hoggaan xumada xilligii Cabdi Weli Gaas ugxanteeda la tallaalay. Goor ay qabtu dhacday dabagal waxba tari maayo ee waxaa ka horreysay in sirdoonku ay kooxaha Puntland halista ku haya diiradda ku hayaan oo ay isgaarsiintooda kor kala socdaan. Waa qalada in dacish iyo shabaab markii ba la iskaga nisbeeyo waayo cid ay tahay lama oga iyada oo ay Puntland nacab badani ku hareerysan yihiin oo ku dhex dhuumanayaan xaqiiqdii.
Deegaan kasta dadkii lahaa uun baa qummaati u sugan kara oo xalka Puntland waxuu ku jiraa in dowladnimadeeda laga soo unko oo lagu saleeyo shacabka maxalliga ah (ahlu deegaanka ah) ee gobol iyo degmo kasta ku dhaqan. Faragalinta faraha badan ee madaxtooyada weeye waxa dhibtan sababay maadaama ay dad badan iyo deegaankoodu Villa Garoowe ka cabanayeen in dhawaale. Dadka ahlu deegaanka ahi haddii ay ismaamulkooda hoose gacanta ku dhigaan oo ay dowladnimada ku qanacsan yihiin iyaga ayaa cadoow kasta iskaga filan oo aan lagu soo dhex dhuunteen abid.
Puntland desperately requires a properly functioning BOTTOM-UP system of governance and not anymore the failed TOP-DOWN system which feels too oppressive and intrusive to most citizens. Mark my words everyone, LOCALISM is the only answer for Puntland’s future survival, peace, and prosperity. Hand power back to the local citizens of every province and district and empower them to manage their own local affairs and productivity and the ensuing transformation will be truly breath-taking across Puntland. There will be no reason for dissent and no room for its enemies.
Degmooyinka iyo gobolada Puntland yaa hadda maamula? Ma waxaa maamula dadkii degaanka u dhashey mise waxaa maamula dad gobolo kale laga keeney.
Sarta waxay ka quruntey waa arrimaha soo socda :
1-Puntland malaha dad aqoon u leh hogaaminta maamulka dhexe iyo kan hoose.
2-Puntland waxaa ku furan afar jaho oo dagaal ah.. Alshabaab iyo Daacish, Somaliland, Koonfurta Mudug iyo Burcad Badeed.
3-Sool, Sanaag iyo Ceyn waa masiibo ku maran Puntland sidee uga dhammaataa ay adag tahay. Golaha Barlamaabka iyo Golaha wasiirada Puntland waxaa xubno ka ah dad munshaar ka qaata Somaliland.
4-Xiriirka iyo galaangalka dawladda Itoobiya waxaa Puntland kaga dheereeyey Somaliland iyo Farmaajo iyadoo Puntland fursado muhiim ah ay heeysato laakiinse ay ka faa`iideysan la`dahay.
4-Hey`addaha sirdoonka Puntland oo u dhisan qaab khaldan oo aan waxba Ka qabankarin ammaanka Puntland.
5-ugu dambeyntii Puntland malahan ilo dhaqaale ku filan ay ku maareynkaraan dawladda waxa yar soo kalana gacmo khaldan ayeey ku dhacaan.
horta illaahay ha u naxariisto gudoomiyihii gobolka nugaal,waxaase la yaable kuwa fafalka argagixisada wadamo kale madaxa ka saaraya inay ka danbeeyeen ee somaliland eedaynaya waar cuqdada iska dhaafa oo talo kale keena lagu cidhib tiro al-shabaab. HARGEYSA
Deni intii uu la wareegay,maamulka dowlad goboleedka Puy ed Soomaaliya,amingii oo awalba xumaa,waa Gaad maamulka madaxda ka ahaa,ayaa si aad ah u sii xumaaday,
Argagixisada shabaab iyo Daacish ,dagaal dhab ah,lala ma galin.
Deni waxa uu ku mashquulay,arimaha dowlada federaalka,iyo in uu sii wado heshiiskii lsgo iibiyey Dakadii Bossaso,taasi waxa ay keentay in amnigii Puntland oo awalba liitay mudo,uu sii xumaado.
Waa in aan msuuliyada amni xumada aan cid kale loo saarin,waa qaadanaya maamulka Deni iyo kooxdiisa.
Weli been ta sii wadaan
Sool iyo sanaag iyo cayn baanu Lee ahay Meel kasta la taagan yhn, gobolka nugaal iyo gobolka bari ayaad leedahay
1—Sanaag dhulbahante hal degmo kuma laha,tuulo fiqi fuliye ayuu ku Lee yahay
2– sanaag wersangeli reerka ugu dhow 60km buu u jiraa oo Waa tuulada yube
Badhan iyo laasqoray oo 100km inka badan u jirta ayey joogaan
Sidee baad u sheeganaysaan sanaag
3– cayn 1912 Ayaa kuugu danbeysey Ilaa hada a hal reer kaama degena
4 – laascaanood Waa zero dhulbahante
Runta isu sheega oo been ta iska daaya aad la taagan THN GOBOLADA SSA SANAAG IYO SOOL IYO CAYN
Puntland waa maamul goboleed ka mid ah,Soomaaliya,dhibaatada ugo wayn ee haysta waa,hadba cida hogaanka Puntland qabata,waxaa kale jira in habka qabaa’ilka oo dhalinayo, in uu cadaawad dhex dhigo dadka Soomaaliyeed,qaranimadii na wiiqo,oo in Ethiopia loo kala ordo,sida qaar dadka ra’yigooda ka muuqdata.
argagixisada al shabaab iyo daacish,waa in sii toos ah loola diriro,
Shacabka Soomaaliyeed oo uu kala qaybiyey hab beeledk waa dad si walba u walaala ee taasi yaan la dhaawicin,
Waa in musumaasuqa jira Puntland iyo iibkii Dakada Bossaso aan la iloobin.
Amnigii Puntland heerkii ugo xumaa ayuu marayaa,mas’uuliyadeeda waxaa leh,maamulka Deni madaxda ka yahay,yaan waxba la warwareegin.
Deni waxwalba isaga kaligii ayuu maamulo,waana wax caadi ka ahaa Puntland tan iyo markii la dhisay,maamulka qabaa’ilka ee Puntland,maamulada kale ee qabaa’ilka iyana waa la mid.
Inta xaalka Soomaaliya sidaasi yahay argagixisada al shabaab,daacish iyo musumaasuqa,boobka hantida dadwaynaha,waa ay socon.
Waa tirakoob run lago sameeyo ciidanka Boliiska ee Puntland oo iminka u dhisan hab maleeshiyaad beeleed ,oo aan hanan karin sugida Nabad gelyada.
Soomaalido waa dad walaalo ah,ee maamulka hab beeleedka ku dhisan,iyo danaystayaal ayaa,hortaagan in Soomaaliya dib u istaagto.
Ethiopia in loo kala cararo oo lago faano waa dadnimo xumo.
Niman yahow waxaad la hadleysaan oo talo siineysaan darbi.
Deni waxuu isku ag-wareejiyey oo la tashadaa intii gayiga somaaliyeed ugu maangaabsaneyd.
awal ayaan tuugo la yaabanayn iyo mobile furasho iminkana ma qaraxbaa?.dhacdadan waxay muujinaysa heerka xukumada deni taagan tahay.wuxu dani xamar ku sheegayey isagay hortaal maanta.askar mirqaansanina amni ma sugi karto.